Kugcine ukubuyekezwa ngomhla ka- Disemba 23, 2020 Ngu Umtholampilo waseHarley Street
Ukuhlolwa kwe-Coronavirus yangasese kuyatholakala emitholampilo eminingi yeHarley Street Clinics neRoche SARS-CoV-2 serology assay kits kungenziwa kutholakale ukuthenga
Njengamanje kuphela abantu esibhedlela abahlolwa i-coronavirus kodwa ungathenga izivivinyo zeRoche Covid-19.
Uma unezimpawu ze futhi ungenaso isiqiniseko uma igciwane, ungase kahle ngeke akwazi ukuthola – noma ngabe ukusebenzela NHS.
UK Uhulumeni akushilo phezu 100,000 abantu base kuze kube manje ihlolwe ukuze coronavirus Covid 19
Iziphathimandla zezempilo ufuna ukubona 100,000 ukuhlolwa wenziwa ngosuku emasontweni amane.
Kunezizathu ezimbili eziyinhloko ukuhlola abantu:
ukuwaxilonga ngawodwana futhi
ukuzama ukuqonda ukuthi igciwane selisabalale kangakanani kubantu abaningi.
Private coronavirus Testing kungenziwa ngofaka e Harley St Imitholampilo futhi lezi sizonikeza nesiqinisekiso kulabo bazibone abasengcupheni nge Covid 19 Test ikhithi.
Oyimfihlo coronavirus test izindleko £ 350 futhi imininingwane emayelana nendlela ukuthenga coronavirus ukuhlolwa kits ingatholakala ngezansi.
Ukuhlolwa ikhithi posted iziguli bese ubuyela khona kule post nemiphumela ngenxa kusele izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi futhi lokhu uzokutshela uma une Covid-19 nge luhlobo thwebula.
Yini ukuhlolwa okuzimele kweRoche Coronavirus?
I kits corona yangasese igciwane yokuhlola ukuhlola bonyana onayo njengamanje igciwane.
I Covid 19 ukuhlolwa ngeke usho ukuthi umzimba wakho unamandla ethize namasosha omzimba alwa off kanye khona kwamasosha omzimba kubonisa ukuthi uke waba igciwane esikhathini esidlule.
Ukwazi ukuthi bangaki abantu abanaleli gciwane kuzosiza iziphathimandla ukuba zilingise ukusabalala kwaso. Lokhu kuzosiza futhi ukulinganisa isilinganiso sabantu abaphethwe njengamanje abangavikelwa mzimba.
ukuhlolwa njalo futhi kusakazeke kangakanani isinyathelo ezibucayi ekunqandeni kokugqashuka nokuphatha coronavirus bhubhane.
Ukuhlolwa ukuthi inkonzo ukusetshenziswa yethu yokwelapha inikezwa yi omunye ukuhlolwa laboratories enkulu kunazo zonke emhlabeni ne idumela elihle kakhulu.
Ukuhlolwa uhlolo iphaneli okuzokwenza kube nomehluko phakathi ebulalayo Covid-19 igciwane futhi 11 nezinye amagciwane non ebulalayo nge izimpawu ezifanayo.
URoche Covid 19 Test
Ngazo zonke izikhathi, isiguli kufanele abe zisekela ngokugcwele emitholampilo okuyinto luqashwe Harley St Umtholampilo.
Uma ukuhlolwa iye ngaphambilini, i-Corona igciwane ukuhlolwa ikhithi okuthunyelwe ukuba iziguli ekhaya noma ikheli encomekayo.
Isampula yokuhlola ibekwa ebhokisini elinikeziwe bese lithunyelwa emuva ngokwemiyalo.
Uma ukuhlolwa sampuli esihle kuwo Covid-19 okuthunyelwe test wokubonisana ke umnyuziki azotholakala ukuze isiguli.
Imiphumela yokuhlolwa kufanele ngokujwayelekile zingatholakali ngaphakathi 7 izinsuku.
Positive Covid-19 Imiphumela lizokwabiwa ne NHS ukuze amacala kungenziwa zilandelwa ngokufanele njengoba iyisifo notifiable.
Sicela usebenzise ifomu lokuxhumana ngezansi ukuze uthole olunye ulwazi.
Filed Under: CoronaVirus Testing Tagged With: Corona Virus Tests, Covid19 Tests, Private coronavirus Testing